1 kudanana app
15 Yakanakisa Kudanana Sites uye Mapurogiramu muna 2021: Chinyorwa chePamusoro Pamhepo Kufambidzana Mapuratifomu neRudzi
Kufambidzana saiti uye maapplication akawanda mazuva ano uye kubvunza mumwe munhu nezvesaiti yavo yavanofarira kunopa mhinduro seyakasiyana semunhu iye pachake.
Nepo vamwe vanhu vangave vachitsvaga rudo newanano, vamwe vangave vachitsvaga chimwe chinhu chisina basa.
Nzvimbo dzakanakisa dzekufambidzana dzinopa zvakawanda zvakasiyana uye zvakavanzika, pakati pezvimwe zvinhu. Ichi chinyorwa chakanangana nekuisa yakanakisa kufambidzana saiti yemunhu wega mamiriro akasarudzika uye hukama zvinangwa.
Zvakanakisa kune hukama hwakakomba - Eharmony
Zvakanakisisa kune vashandi vanoshanda - EliteSingles
Yakanakisa yemahara kufambidzana saiti - Okcupid
Yakanakisa zvemasikati kufambidzana saiti - AdultFriendFinder
Yakakura kwazvo kufambidzana app - Tinder
Yakanakisa yepamusoro yekufambidzana saiti - SilverSingles
Yakanakisa hunhu inoenderana system - Hinge
Zvakanakisa zvechristian singles - ChristianMingle
Akaroora akanyanya kudanana saiti - AshleyMadison
Yakanakisa kufambidzana app yevakadzi - Bumble
Vakadzi vakawanda kupfuura varume - Kutsvaga
Yakakomba kufambidzana saiti yepasi pemakumi matatu - Zoosk
Maitiro Akaita Nzvimbo Dzakanakisa Dzekufambidzana Dzakaongororwa.
User ongororo - Nokuti mumwe nomumwe panzvimbo isu akatarisa Anwendung chitoro ongororo, kurukurirano Forum, uye trustpilot wongororo kuwana nzvimbo pamwe zvepamusoro avhareji kureva vari muboka kupiwa.
Kuvanzika nekuchengetedzeka - Wese munhu akanzwa nyaya dzinotyisa dzemazuva epamhepo dzaenda zvisingaite kana zvine njodzi. Nzvimbo dzakanakisa dzekufambidzana dzinowanikwa mukati mehunhu hunhu uye kunyange mamamerita kuti vapindire kana mushandisi ari kunze kwetara kana achiisa njodzi kune vamwe.
Unique Zviri - Some kudanana Websites chete kupa rakananga vanosangana-up zvokusarudza, kana kuburikidza Chat kana paIndaneti. Vamwe vanobatsira vanhu kuti vawane mutambo wavo nemitambo inoenderana, nzira dzekusefa, nezvimwe. Izvi zvinowedzera zvinoratidza mukana uri nani pakubudirira.
15 Akanyanya Kudanana Sites e2021
1. Eharmony - Yakanakisa kune hukama hwakakomba
Mamirioni evakaroorana akabatanidzwa neEharmony-muchokwadi, vashandisi ve400+ vanoroora mumwe munhu wavanosangana naye pawebhusaiti zuva rega rega. Chikuva chakatohwina mibairo senzvimbo yepamusoro yekutsvaga hukama hwakasimba.
Eharmony inoda kuti vashandisi vapedze ongororo yakareba pakusaina, iyo inoshanda se "inoenderana inoenderana system." Saiti iyi inoshandisa ruzivo urwu kuratidza vashandisi vanogona-kuve vanobudirira sarudzo dzekufambidzana.
Iyi data-inotyairwa, inosarudzika nzira ndiyo chikonzero nei Eharmony iri yakanakisa imwe nzira kune chero munhu arikutsvaga hurefu-hukama hukama.
2. Elite Singles - Yakanyanya kune vanoshanda vashandi
Elite Singles 'nhengo iri inokwanisa kwazvo, ichiita sarudzo yakanaka kwazvo kana vashandisi vari kutsvaga hurukuro dzinokurudzira. Around 85 muzana yevatori vechikamu vane dhigirii redzidzo yepamusoro, uye 90 muzana vari pamusoro pemakore makumi matatu. Aya manhamba anosimbisa hupenyu hupenyu mune yekufambidzana equation.
Iyo saiti inowirirana vashandisi nemamwe ma singles vachishandisa algorithm yakatarisana nemhinduro dzavo kubvunzo remibvunzo. Vanhu vanonyanya kuishandisa pakutsvaga kudyidzana kwenguva refu, zvese zvemuno nekunze. Izvozvi iri kushanda mumarudzi makumi maviri neshanu.
3. AdultFriendFinder - Best nokuda hookups
Saiti ino haina kuitirwa chero munhu anotsvaga hukama hwakareba. Inopa sarudzo mbiri dzekutanga: kutamba nerudo (paapp) kana kukochekerana. Ndizvozvo, uye kune vamwe vanhu, ndizvo chaizvo zvavanoda.
AFF, kana Adult Shamwari Inotsvaga, inosanganisira nzira dzakasiyana dzekutaurirana, kusanganisira mameseji, vhidhiyo ("madheti epamhepo"), mhenyu mhenyu, nekutaurirana munharaunda.
Kunyoresa neiyi app kuri nyore. Kusiyana nedzimwe nzvimbo dzekufambidzana dzinoda kubvunza mibvunzo, AFF inoichengeta kune 30-yechipiri kusaina maitiro. Vashandisi vanogona kubva vatanga kutsvaga nekukasira.
4. SilverSingles - Best kwemakore anosarudza makore 50
SilverSingles yave iriko kwemakore gumi nemanomwe uye ndeimwe yekare kufambidzana maapplication vanhu vanopfuura makumi mashanu. Sevhisheni iyi inosimbisa yega yega nhoroondo, ichivimbisa kuti vatengi vayo ndevechokwadi uye vakachengeteka.
Vashandisi vanozadza hwakadzama hunhu hwemibvunzo iyo inosanganisira avo ehupenyu zvirongwa, zvavanokoshesa, maitiro, uye zvimwe zvinhu, saka iyo webhusaiti inogona kusefa akakodzera machisi.
Iyo chikuva inowanikwa kuburikidza newebhusaiti kana nharembozha iko kunhengo dzehukama kuri mahara.
5. Bumble - Sarudzo huru yevakadzi
Bumble haina kujairika pakati pekufambidzana zvikumbiro nekuti inopa vakadzi simba kutanga kutaurirana. Varume havagone kubata kwavo kwevakadzi machisi kunze kwekunge mukadzi atanga kuonana. Izvi zvinobvumira vakadzi kuti vatungamire kamwe chete.
Iyo chikuva inotarisa pakubata nekukurumidza. Vashandisi vane maawa makumi maviri nemana ekutaurirana, uye mushure meizvozvo, mutambo unopera. Izvi zvinoratidza kuti saiti iyi yakanangana nekuzvibata hookups, asi zvakare inokodzera kune avo vasingade kushandisa yakawanda nguva vachitenderera.
Izvo zvinoshandiswa zvinobatana zvisina mushe nemapuratifomu enzvimbo dzekudyidzana akadai saFacebook, Spotify, uye Instagram, zvichibvumira vashandisi kuratidzira akasiyana maitiro ehunhu hwavo. Maakaundi anooneswa zvakare kubatsira kudzivirira maficha ekunyepedzera kubva kubuda kazhinji.
6. Hinge - Inovandudza kufambidzana app
Iyo kambani yakadzosazve Hinge muna 2016, uye ndiyo imwe yeanonyanya kutaurwa nezvekufambidzana maapplication mumakore achangopfuura, angangoita nekuda kwevashandisi vayo 'mitezo yekubudirira. Vanenge makumi manomwe neshanu muzana evashandisi veHinge vanosarudza kuenda pazuva rechipiri mushure mekusangana nemitambo yavo.
Ivo vane Hinge profiles vanogona zvakare kusiya wongororo, iyo iyo Hinge software iyo yobva yashandisa kubatsira kugadzirisa kwavo machisi algorithms mune ramangwana.
Hinge papuratifomu inonakidza nekuti inokurudzira vashandisi kufarira kana kutaura pane chimwe chikamu cheumwe munhu chimiro. Inopa nzira yekuti vanhu vapindirane kupfuura zvakajairwa chat.
8. Kutsvaga - Kune vana baba vane shuga neshuga vacheche
Kutsvaga kwakasarudzika nekuti inotarisa pakubatanidza vechidiki (shuga vacheche) nevakuru, vakapfuma vane shuga vana baba. Sezviri pachena, zvakajairika kupfuura zvinotendwa nevazhinji, zvakapihwa chikuva ikozvino chine vanopfuura mamirioni gumi vanyoreri. Munhu wega wega anogona kudoma mazwi ake vasati vabatana, kunyangwe vachida kufamba, kuda mvumo, kana zvimwe zvinotsanangurwa.
Iko kune yakakwira yevakadzi-kune-murume chiyero, zvinoreva kuti vanababa vane zvakawanda zvekusarudza kusarudza kubva, kunyangwe zvichiratidzawo kuti makwikwi anogona kuva anotyisa kuvacheche.
9. JDate - maJuda chete
JDate ndeye yekufambidzana sevhisi chete yevaJudha singles. Yakavambwa mu1997 uye yave kuwanikwa munyika dzinopfuura zana, ichibvumira vashandisi kuti vataurirane nema singles echiJuda mumitauro mishanu dzakasiyana (Chirungu, Chihebheru, ChiFrench, ChiGerman, uye Spanish).
Kana zvasvika pamichato yepamhepo yechiJuda, JDate inofanirwa kuenzanisa anopfuura makumi mashanu muzana yeavo vakaroora.
Vashandisi vanogona kubata chero munhu ane yemahara kana yakabhadharwa nhengo. Basa revatengi rinotarisa yega profile kuona kuti rakagadzirwa nevatengi vechokwadi.
10. ChristianMingle - Yakanakisa yechiKristu kufambidzana saiti
ChristianMingle inobatsira vashandisi mukati memharaunda yevaKristu nekuwana kwavo kusingaperi rudo. Inozvirumbidza pamusoro pevashandisi vane miriyoni imwe, uye saiti yacho inokurudzira zvakajeka "kufambidzana nekutenda" kune mukana wenguva refu.
Iko kune yemahara account sarudzo kana yemwedzi nhengo ye $ 29.95. Iyo yekupedzisira inouya nechivimbiso, apo mushandisi anogona kugamuchira mwedzi mitanhatu yemahara mushure mekutanga kwavo kwemwedzi mitanhatu kuve nhengo kwapera kana vasina kuwana imwe yakakodzera.
11. Zoosk - Huru nzanga yenyika
Zoosk inozvirumbidza imwe yemapuratifomu akakura padanho repasi rose, iine nhengo dzinopfuura mamirioni makumi mana pasirese. Zuva rega rega, vashandisi ava vanoendesa anopfuura mamirioni matatu mameseji mumitauro makumi maviri neshanu. Zoosk inoshanda munyika dzinopfuura makumi masere.
Iyo webhusaiti inoshandisa chimwe chinonzi "hunhu matchmaking tekinoroji" kubatsira singles kuwana vanhu vanoenderana vanogona kuenzana nemutambo wakaitwa kudenga.
Mushure menguva yemuyedzo yemahara, nhengo yeZoosk inodhura $ 29.99 pamwedzi.
12. Reddit R4R - Zvakanakisa kune vashandisi veReddit
R4R, kana Redditor yeRedditor, iri subreddit yakatsaurirwa kubatanidza vashandisi. Iyo puratifomu haishandisi inoenderana scheme, pachinzvimbo, inzvimbo hombe yekushambadzira yemunhu.
Yekushandisa yekutsvaga yekushandisa inounza yavo yavanofarira mhedzisiro. Reddit vatengi vanoishandisa kuwana zviitwa, shamwari, mapato, hookups, uye kunyange hurefu-hukama hukama.
Kunyangwe iri forum yakajairwa, kuchine mitemo ine chekuita nezera, kuvanzika, mutemo, uye hunhu. Semuenzaniso, zvinyorwa zve NSFW zvinotenderwa asi zvinofanirwa kunyorwa seizvi kuitira kuti vashandisi vagone kusarudza kana vachida kuona iyo posvo kana kwete.
13. OkCupid - Yemahara uye inozivikanwa
OkCupid ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekufambidzana uye inoratidzira profiles idzo dzimwe nhengo dzinogona kuongorora mushe vasati vabatana. Inowanikwa mune ese desktop uye nharembozha vhezheni, iine zvakawanda zvezvinhu izvo vashandisi vanogona kuzadza kuti zvive nemhedzisiro.
Saiti iyi inosanganisirwa, ine anopfuura makumi maviri echikadzi uye ezvepabonde sarudzo.
14. Ashley Madison - Wakanakisa akaroora saiti yekufambidzana
Ashley Madison nderumwe rwemhando, rwakagadzirirwa vanhu vakaroora vanotarisa kuve neyakavanzika nyaya. Izvo hazvina kubatana nemagariro enhau nhoroondo nekuda kwechikonzero ichi.
Kune zvimwe zvakavanzika zvehunhu uye maficha ekubatsira vashandisi kugara vasingazivikanwe kana vachitya kubatwa. Pamusoro pezvo, Ashley Madison ane sarudzo yekufamba uko nhengo dzinogona kutsvaga kwadzinouya nzvimbo pamberi.
Match.com - Mechi yanga iriko kubvira 1995 uye inopa chaiyo yekufambidzana chirongwa chevabatsiri kubatsira vatori vechikamu mukufananidza uye kufambidzana mazano.
Tinder - Iyi yekufambidzana app inozivikanwa zvakanyanya uye inouya nekutendeka. Vazhinji vanhu vanoishandisa kune hookups, vachipihwa yakakura yavo mushandisi base uye nzvimbo inotyairwa algorithms.
BlackPeopleMeet - Kwemakore anopfuura gumi nemasere, BlackPeopleMeet yanga ichibatanidza maAmerican singles ari kutsvaga rudo. Iyo saiti inokwana zviuru zana + nhengo dzinogona kutamba, email, uye kuona kuti ndiani anoona chimiro chavo.
Grindr - Grindr ndeye chete yeLGBTQA + vanhu. Iyo inzvimbo-yakavakirwa, uye vashandisi vanonyanya kuishandisa yekukochekera kumusoro, kunyangwe yakareba-temu machisi zvakare anogona.
Hove dzakawanda - Iyi webhusaiti yekufambidzana ndeyeCanada-based, asi inobvumira vashandisi kutaurirana nevanhu vanobva kumativi ese epasi.
Sei Vanhu Vachishandisa Pamhepo Kufambidzana Sites?
Kufambidzana nzvimbo dzinoisa vanhu padziva rakakura kwazvo revanhu pane munhu mumwe chete angave nemukana wekusangana muhupenyu chaihwo. Izvi zvinonyanya kuitika kune vashandisi vane vashoma boka revanhu, vatsva kuguta, kana neimwe nzira.
Kushandisa aya masosi kunogona zvakare kubvumira vashandisi kuve vanosarudzika zvichibva pamatanho akakosha kwavari: akagovana tsika, zvinokuvaraidza, kana rudzi rwehukama hwavanoda.
Kufambidzana Mapurogiramu Akachengeteka Here?
Kazhinji, ehe, kufambidzana maapplication akachengeteka, asi izvo zvinongoda kunzwisisa uye kunyevera. Zvirongwa zvine zvakavanzika munzvimbo kuti zvibatsire nhengo kubuda, senge kusimbiswa kweprofile. Mamwe mawebhusaiti anotarisa zvakare vatori vechikamu nemaoko, achiwedzera imwe dura rekuchengetedza kune inoitika.
Vanhu havafanirwe kupa ruzivo rwega vasati vasangana nemumwe munhu muhupenyu chaihwo, senge yavo yezita, kero, kana kunyange nharaunda yavo. Izvo zvakare zvine hungwaru kuronga zuva rekutanga munzvimbo yeruzhinji. Kubata shamwari kare uye kuvaudza kuti vari kuenda kune mumwe munhu wavasingazive zvakare haisi yakaipa pfungwa.
Maitiro Ekuona Kuita Kwako Kuchengeteka Paunenge Uchidanana Pamhepo?
Usambofa wakapa ruzivo rwemunhu kune mumwe munhu pamhepo, kunyanya usati wasangana nemunhu. Ruzivo urwu runosanganisira zita, mushandirwi, kero, uye kunyange nharaunda.
Paunenge uchisangana nechero munhu pamhepo, ronga mazuva ekutanga kuti aitike munzvimbo dzeveruzhinji. Iyi inogona kunge iri kahawa, hotera, yemitambo, kana imwe nzvimbo yeruzhinji. Dzivisa nzvimbo dziri dzoga dzakadai semabhishi, uye usambobvumidza vausingazive mumba.
Chekupedzisira, bata shamwari isati yasvika zuva kuti uvazivise nezvekwavari uye nguva yekufungidzira yekufungidzira. Vazivise kana yasvika nguva yekuenda kumba. Kuti upe imwe yekuwedzera dziviriro, kumbira kuti vafonere kana kutumira mameseji panguva yemusi kuti uve nechokwadi chekuchengetedza zvakanyanya.
Chekutanga Zuva Mazano
Kufambidzana kwenguva yekutanga kunogona kukuremedza! Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka uye kusangana nemutambo uri munhu, tevera aya matipi:
Chengetedza pfungwa dzakasununguka. Vanhu vanogona kutaridzika kunge vakasiyana pamunhu pane zvavanoita online, saka gadzirira izvo zvido zvekuchinja.
Dzivisa kunyanyoita zvisina mwero. Kugadzira musangano wemagariro, senge zuva rekudya kwemasikati, inobvumira vashandisi kuti vazivane vasina kunzwa vachimanikidzwa kupedza maawa pamwe chete.
Wongorora hurukuro usati waenda pane zuva. Verenga zvekare chimiro chemunhu uye wongorora zvawakurukura, uye ronga misoro yekukurukurirana.
Zvinoita Here Kukudziridza Hukama Hukama Paunenge Uchidanana Pamhepo?
Ehe, zvinogoneka! Kana vanhu vaviri vakasangana, vachiwirirana, uye kemesitiri iriko, hukama hunogona kushanduka kuita chimwe chinhu chakatsiga uye chakachengeteka. Zvinoitika mazuva ese, nekuda kwenzvimbo dzakaita seEharmony.
Dzepamhepo Kufambidzana Saiti Mukupedzisa
Ihwo hunyengeri hwekufambidzana pamhepo ndewekuti munhu azive zvavanoda uye zvavanoda muhukama zvisati zvaitika. Kubva pane zvakanyorwa pamusoro apa, kune akawanda marudzi ehukama anowanikwa pane aya masaiti.
Chengetedza chenjedzo asi pfungwa dzakavhurika kana uchishandisa saiti yekufambidzana. Saiti yega yega pano ine chimwe chinhu chekupa, zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Shanyira tigersoftinder.com kune zvimwe zvigadzirwa kuenzanisa uye ongororo.
Disiki: Ruzivo harwune mazano kana kupihwa kutenga. Chero kutenga kwese kunoitwa kubva kumusoro kwekuburitsa kunoitwa panjodzi yako wega. Bvunza nyanzvi chipangamazano kana nyanzvi usati watenga zvakadaro. Chero kutenga kunoitwa kubva pane iyi link kunoenderana nemitemo yekupedzisira uye mamiriro ekutengesa kwewebhu webhusaiti ataurwa mune sosi. Mupepeti wemukati pamwe neayo epasi ekuparadzira vanobatirana haatore chero mutoro zvakananga kana zvisina kunangana. Kana iwe uine chero zvichemo kana zvekopiraiti zvine chekuita nechinyorwa chino, nyoro bata kambani iyi nhau ndezve. Izvo zvinongedzo zvirimo mune ino chigadzirwa ongororo zvinogona kukonzeresa diki komisheni kumunyori kana iwe ukasarudza kutenga chigadzirwa chakakurudzirwa pasina imwezve mari kwauri.
15 yeakanakisa Ekufambidzana Pamhepo Zvirongwa Kuti Uwane Ukama
Kutarisira kunyudza tsoka dzako kudzoka kune nyika yekufambidzana mushure menguva yakareba yekudzidzira kushamwaridzana kwevanhu? Kana kufambidzana newangangodanana naye mu "nguva dzakatangira" kwanga kwakaoma - kuwedzera denda repasirese kumusanganiswa kwaita kuti zvive zvinonetsa kuwana iyo spark kana kubatana. Pakati peichi chitsva chakajairwa, kutamba nerudo neanogona paramours pane online kufambidzana app ingave iri nzira yakanakisa yekuziva mumwe munhu.
Asi chokwadi ndechekuti, online kufambidzana kunogona kunzwa kunetesa. Izvo hazvisi zvekungotonga zvichibva pane akati wandei mafoto uye-imwe-mutsara bios, kana kusagadzikana kwekutumira akananga mameseji (kana maDM) kune vausingazive chete mweya. Huwandu hwakawanda hwemaapplication uye vashandisi vanogona kuita kungosvetuka kunge senge rinotyisa basa.
Muchokwadi, iyo online yekufambidzana vateereri inotarisirwa kukura kusvika makumi matatu nemakumi mashanu emamiriyoni evashandisi na2023, sekureva kwedata kubva kuStatista. Uye panosvika 2040, eHarmony inofungidzira kuti 70 muzana yevakaroora vanenge vatanga hukama hwavo online. Izvo zvinokwanisika kuita kuti iyo yekufambidzana nyika inzwe inokwanisika, kunyangwe-iwe unongofanira kuwana chaicho app. Semuenzaniso, kune niche mapuratifomu akanangana neavo vanoda kurima , bhekoni , kana kutobata ndebvu (hongu, zvakakomba).
Saka kana iwe uri kutsvaga kuti uite kubatana kwakapamhama ne, iti, mumwe munhu anopfuura makumi mashanu, achangodanana mushure mekurambana, achitarisira chaiyo vhidhiyo zuva, kana vari kutsvaga hukama, aya epamhepo kufambidzana maapplication (mamwe, kunyange emahara) kufukidza zvese zvigadziko.
Match ndiyo inonyanya kufarirwa online kufambidzana app mune gumi nematanhatu maererano nePCMag ongororo yevanhu zviuru zviviri. Seimwe yeiyo OG kufambidzana masevhisi (inofambiswa kubva pawebhusaiti-chete kune webhusaiti uye app), Match ine yakatarwa kukwidza kune avo vari pakati pe45 ne65 vachitsvaga hukama hwakakomba; kumwe kutsvagurudza kwakaitwa neSurveyMonkey kwakawana kuti 58 muzana yevakuru vane makore makumi mashanu nemashanu kusvika makumi mana nemashanu vanoshandisa Mechi, vanopfuura kaviri muzana vanoshandisa Tinder. Unogona kurodhaunura mahara, kunyange izvo zvichizokutadzisa kubhurawuza; kana iwe uchida kunyatso meseji vangangoita vanyowani, kunyoreswa kunotanga pa $ 21.99 pamwedzi.
Kufambidzana maapplication haasi eamamirioni chete; 20 muzana yevashandisi veinternet vari pakati pemakore makumi mashanu nemashanu kusvika makumi matanhatu nematanhatu vakashandisa chirongwa chekufambidzana kana sevhisi, sekureva kwesarudzo kubva kuhunyanzvi nekambani yekutsvagisa Morning Consult. YeduTime inoshandura pfungwa yekukochekera tsika pamusoro wayo; pachinzvimbo, inokurudzira vashandisi kutsvaga vanyoreri, shamwari, misi, hukama hwakareba-nguva uye vakaroorana. Iyo yemahara-yeku-kurodha app inoita kuti iwe utumire maemail, flirt, uye mechi neangangove shamwari, uye premium kubhadhara ($ 38 pamwedzi) inobvumira zvimwe zvekuwedzera maficha senge kugona kuona kuti ndiani afarira mbiri yako.
Bumble inozvipatsanura kubva kune mamwe ese ekufambidzana masevhisi anozadza chitoro cheapp nekuda kuti vakadzi vatore danho rekutanga kana mutambo waitwa. Iwe zvakare unongowana maawa makumi maviri nemana ekutumira meseji, kunze kwekunge iwe ukaisa mari muKukwidziridza nhengo, iyo inotanga pa $ 10.99 kwevhiki. Vakadzi vanofarira Anwendung nekuti inoderedza huwandu hwevasina kukumbirwa mameseji, uye varume vanoida - muchokwadi, 58 muzana yevakapindura avo vakasarudza Bumble muongororo yePcMag vaive vakomana - nekuti zvinotora kumwe kumanikidzwa kutanga. Uyezve, kana iwe wawana mumwe munhu waunofarira, iwe une sarudzo yekuenda pane vhidhiyo zuva mu-app.
Tinder inogona kunge yakaunza ku "hookup tsika," asi ichiri chimwe chepamusoro kufambidzana maapps muUS Iyo ine vangangoita mamirioni masere vashandisi, yakanyanya kune chero mamwe madhiri app akaongororwa naStatista . Izvi zvinoreva kuti une mukana wakasarudzika wekufananidza nemumwe munhu anokanganisa kufarira kwako - kunyangwe zvichitorera kwakawanda-kuruboshwe kuti usvike ipapo. Iyo app ndeyemahara, asi iwe unogona kuwana premium maficha senge Tinder Plus kutanga kutenderedza kutenderera $ 9.99 pamwedzi.
5. Hove dzakawanda
Imwe yeayo ekutanga kufambidzana mawebhusaiti-akatendeuka-maapps aine ziso rekutsvaga hukama, POF yaive nemamirioni makumi mapfumbamwe evashandisi mune yayo heydey. Ichiri chakakurumbira (Statista yakachiisa senhamba yechipiri), uye iyo app inoti uri 2.7 zvakapusa mukana wekupinda hurukuro mumaawa makumi maviri nemana ekutanga pane mamwe maapplication. In polling yayo munhukadzi vanoshandisa, kuti Anwendung akawana kuti 44 muzana vaiva vanaamai-uye vasina kuti kuwana mudiwa 10 muzana kupfuura avhareji user. Dhawunirodha uye swipe yemahara, uye simudzira kuti uwedzere mamwe mafoto kana kuratidza kumusoro kutanga kune vangangobatirana navo kutanga pa $ 19.99.
Mushure mekuzadza fomu remibvunzo uye zvinokumbirwa neapp (funga zvimedu zvinopwanya aizi zvakaita seizvi: "yangu huru pet pet peeve ndi…" uye "rwiyo rwangu rwekuenda ku karaoke ndi…"), Hinge ichatanga kukufananidza nevashandisi vanofarira zvakafanana. Iyo algorithm zvakare inokushandira iwe neako " Anowirirana Kwazvo " machisi-auri iwe kanokwana kasere mukana wekubuda naye, vanodaro. Uye kwete chete iyo iyo app inokuratidza iwe kuti vangani vanhu vakakuda iwe, zvakare inokuudza izvo zvavaifarira nezvako, zvichiita kuti zvive nyore kutanga hurukuro.
Algorithm OKCupid anoshandisa akatevedzana mibvunzo kuona chii "muzana" uchaita anoenderana chero ayo mamiriyoni mashanu vanoshandisa. Iko kutariswa-kunotungamirwa kutarisisa kunonyanya kufadza kune vakadzi, avo vakaita 58 muzana yevakapindura avo vakasarudza iyi purogiramu muPCMag's poll. Izvo zvakare zvakasarudzika, zvinopa gumi nemaviri mazita evanhukadzi uye makumi maviri ezvepabonde kuitira kuti ugone kuzvitsanangura iwe pachako zvaunoda uye fanane neicho chauri kutsvaga.
Pakutanga chirongwa chepaFacebook, Zoosk ikozvino ndiyo imwe yenzvimbo dzakakura kwazvo dzekufambidzana kunze uko, iine anodarika makumi matatu emamirioni kubva pakatangwa muna 2007. Nhasi, ine vanoshandisa vanopfuura miriyoni vanoshingaira, sekureva kwaStatista - uye mazana mashanu ezviuru avo vari kubhadhara nhengo, zvinoreva kuti inopfuura hafu yevashandisi vakazvipira zvakanyanya kuti vawane mutambo. Panzvimbo pekukumanikidza kuti uzadze bhuku remibvunzo mirefu, maalgorithm epurogiramu yacho auri kushamwaridzana nawo kuti ushumire zvirinani machisi.
Panguva ino, eHarmony izita remhuri. Ndiye mukwikwidzi mukuru waMatch, uye ndiwo mazera maviri akakura ane makore makumi matatu- kusvika makumi mana nemana- makore makumi mashanu- nemashanu- kusvika makumi matanhatu nematanhatu. The chiratidzo-up muitiro-zvinosanganisira kwokukurukurwa chaizvo, 150-mubvunzo remibvunzo-ari rwendo, asi zvizivikanwe kamwe vaizviti kuti mutoro kusika 4% yemichato iri US Plus, shoma chipeto nhengo kusarudza kuenda vhidhiyo zuva usati wasangana nemunhu.
10. Kofi Inosangana neBagel
Mazuva ese masikati, Kofi Inosangana naBagel vanozotenderedza nekutumira iwe machisi emhando yepamusoro - kana "magegel" sezvavanovaidza - akasarudzwa nealgorithm yayo. Pasina kutsvaira kwakabatanidzwa uye kusarudzika kwezuva nezuva kusarudzwa, iyi purogiramu yakagadzirirwa kuti isapfuure. Uyezve, iwo akadzama profiles uye "echizi-mudariki" mibvunzo inokurudzira kutaurirana kune chinangwa, ichiita kuti ichi chirongwa chikwane kune avo vari kutsvaga kutanga hukama hwakakomba.
Nevashandisi vanopfuura mamirioni gumi nemana, Hily anomiririra "Hei, ndinokuda!" Iyo app inoshandisa AI kuenderera mberi nekuvandudza machisi, uye iine maficha senge Hily nyaya dzekukubatsira zvirinani kutora zvauri. Iyo app ndeye mahara, iine sarudzo yekunyorera yeasina-isina uye incognito-mode chiitiko.
Kana iwe uchitsvaga vamwe vatema vega vatema vanogovana zvaunofarira, BLK chirongwa chekufambidzana icho chinonyanya kutsvaga hukama ihwohwo munharaunda yavo yevashandisi. Iine anodarika mamirioni mana kurodha pasi, iyo yemahara app inoita kuti iwe uenzane uye utaure neanogona kuve shamwari Kana, kukwidziridzira kuhunhengo hwepayimusi ($ 10 pamwedzi) yechiitiko chisina kushambadzira, chimiro chakakwidziridzwa, nhamba dzisingagumi dzekuda, uye kugona "kudzosera kumashure" nekupa mumwe munhu mukana wechipiri.
Wakatora moyo muvakidzani akanaka asi usingazive zita rake? Kugara uchitarisana nemunhu kana uchifamba imbwa yako asi usati watanga hurukuro? Happn chirongwa chekufambidzana chinogona kubatsira kuita iwo maratidziro anoita kunge akarasika ave echokwadi. Nekushandisa iyo nzvimbo pafoni yako, unogona kuenzanisa nevanhu zvakare pane iyo app vari padyo. Uine vanopfuura mamirioni zana vashandisi pasi rese, mikana iwe ungangowana yako yepedyo kupwanya.
Yakagadzirwa nevakadzi queer, iyi LGBTQ + yekudyidzana app (uye yemagariro chikuva) ndeyevakadzi nevanhu vasiri mabhinari vanhu vanoda kutsvaga rudo munzvimbo yakachengeteka. Kune vashandisi vavo mamirioni matanhatu, HER anopa nharaunda dzemu-app uye zviitiko zvakaitirwa kubatsira kukurudzira iwo marambi ekubhururuka.
15. Mukati medenderedzwa
Kana iwe uri wakakomba nezvekutsvaga imwe hafu yako uye uchida kudzivisa kutsvaira munzvimbo isina chinhu, Inner Circle inoda kuti vese vashandisi vagamuchire "The Date Better Pledge" iyo inotsanangudza kuzvipira kuti uve "unoremekedza, wakavimbika, uye unobatanidza." Iyo app inopa yakadzama profiles, yakasarudzika mafirita, uye kukurukurirana kukurudzira - kuti iwe ugone kudzivirira iyo inotyisa imwe-liner "hey" mameseji.
Iwo Akanakisa Ekufambidzana Mapurogiramu ekuti Uite Iri Rimwe Gore reRudo
Wese munhu anoziva mumwe munhu akasangana naye "asingagumi munhu" kunyangwe online kufambidzana asi senge kufambidzana pachayo, kukutsvagira saiti yakakodzera iwe unogona kutora kumwe kuyedza uye kukanganisa. Iyo Kochava Collective, inomiririra yemahara yakazvimirira nharembozha yemusika musika, yakakwenya manhamba kuti ikurudzire mashoma masosi zvichienderana nenhamba yevashandisi. "Tine data rinowanikwa pazvinhu zvinopfuura mabhiriyoni 7.5," anodaro Jake Courtright, maneja anotungamira waKochava. “Sechikamu cheiyi seta data, tine ruzivo rwe 'app graph' pane izvi zvishandiso, rinova iro runyorwa rwemaapplication akaiswa pazvinhu izvi. Takatarisa kune ese makuru maapplication ekufambidzana muGoogle Play neazvitoro zveapp, ndokuzoona maapps mashanu ane akanyanya kuiswa mukati medata redu. "
Asi nekuti havazi isu tese tinoita sarudzo zvichienderana nenhamba chete, isu takapedzisa runyorwa urwu nemamwe mashoma sarudzo angaenderana nemamiriro ako chaiwo. Zvimwe zveizvi zvinopa vanhu veLBBTQ +, vashandisi veimwe zera, Vatema kana vashandisi veBIPOC, avo vane zvido zvavo zvakafanana uye nevamwe vangangotadza kuwana zuva ravo rakakwana pane chimwe cheanonyanya kufarirwa maapp. Kunyangwe iwe uchitsvaga wekutamba zvisina kujairika, rebound kuti utore pamusoro pekurambana kana hwako hunotevera hwakareba hukama, unogona kutanga nekudhawunirodha imwe yeaya kufambidzana maapplication.
Kana iwe wakambove online zvachose, iwe ungangoziva nezve Tinder. Zvinoenderana neKochava Collective, iyo app ine nhamba yepamusoro yevashandisi veese kufambidzana maapplication kunze uko. Nepo vashandisi vazhinji vachitendeukira kuTinder kuitira zvakasangana kusangana, vamwe vakawana rudo rwekureba pano.
PaBumble, vakadzi ndivo vanowana kutanga kutaurirana. Ehe, ndeupi mukadzi anoita kuti danho rekutanga riite iri nyaya kune vakadzi veGBBTQ +, asi vakadzi vanotsvaga madhiri vanogona kuiwana iri mweya wemhepo nyowani. Kochava anoti vazhinji vevashandisi vayo vanowirawo mukati me26- kusvika kumakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa zera, saka vadiki madhatari vangangodawo izvozvo.
Chero ani anga ari mumutambo wekufambidzana kwekanguva angangodaro akanzwa nezveOkCupid, iyo yanga iriko kubvira 2004. Iyo OG ikozvino ine app ine siginecha yavo yemibvunzo nezve zvese kubva kuchinamato kusvika nzungu butter vs jelly kukubatsira iwe kuti uwane mumwe wako akakwana.
Pamashandisirwo akaitwa naKochava, iyi yaive nemushandisi mudiki mushure meBumble, iine inopfuura hafu yevashandisi vayo vaiuya vari pasi pemakore makumi matatu nematanhatu. .
Vashandisi vane mamwe mashoma mitsara yekuseka uye tambo dzesirivheri vanogona kuwana mweya yehukama paapp pamwe nevanhu vazhinji mune yavo huwandu hwevanhu. Dhata yaKochava inoratidza kuti vazhinji vevashandisi veMeMeMe vari mumatanho ane makore makumi mana nemana- kusvika makumi mashanu nemashanu, vachiteverwa zvakateedzana neiyo bracket 55- 65.
Kunze kwekuve neakawanda mushandisi base, Kochava anozvinyora nenzira iyoyo vakomana kupfuura vakadzi kurodha pasi Happn, nzvimbo-based kufambidzana app. Vakadzi vanotsvaga magents, dai izvo zvipingamupinyi zvive zvinokufarira.
Zvakanakisa Kudanana Mapurogiramu
Vapepeti vedu vakazvimiririra vanotsvaga, kuyedza, uye kukurudzira zvigadzirwa zvakanakisa; iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve yedu yekuongorora maitiro pano. Tinogona kugamuchira makomisheni pane zvakatengwa kubva kune edu akasarudzwa ma link.
Mufananidzo: Luis Alvarez / Getty Mifananidzo
Kuenda kune imwe nyika yekufambidzana maapplication kunogona kukurisa, kunyanya kana iwe usina chokwadi chaicho chekutora. Mamwe maapplication akaitirwa hukama hwepfupi-pfupi, nepo vamwe vachikurudzira kunyatsozivana vasati vasangana kuhotera kana kofi yeFaceTime. Kunyangwe iwe uri kutsvaga kutungamira pasi pasi penzira kana yekungofungira fling, pane sevhisi yakakunakira iwe.
Pano tave takapeta akanakisa kufambidzana maapplication, kuti ugone kusangana nemutambo wako- kunyangwe zviri zvehusiku kana zvachose.
Yakanakisa Kudanana Mapurogiramu e2021
Zvakanakisisa Kwazvo: Hinge
Zvakanakisisa Kwemuchato: Mechi
Zvakanakisa zveKusarudzika: Raya
Zvakanakisa Kwemazuva Ekutanga: Bumble
Yakanakisa LGBTQ Kudanana App: HER
Zvakanakisa Zvekufambidzana kwechiJuda: JSwipe
Zvakanakisa Zvekujairana Kufambidzana: Tinder
Nei Tichiisarudza: Hinge inokupa yakaganhurirwa yekubatana pazuva, ichiita sarudzo iri nani kune vanhu vari kutsvaga hukama hwakakomba.
Inogovana rumwe ruzivo nezve vanhu, kusanganisira zvavanofarira nezvisingadiwe
Kunzwa kwakanyanya kutarisisa pahurukuro dzine musoro uye kuvaka hukama
Inongopa yakatarwa nhamba yemitambo kunze kwekunge iwe uchibhadhara kukwidziridza
Vanoda kuti vanhu vabhadhare kuti vape machisi "rose," zvichiita kuti chirongwa ichi chivhiringidze
Hinge yakatanga senzira yekubatanidza shamwari dzevanhu uye nevanhu vari kunetiweki yako. Payakavambwa na CEO Justin McLeod, iyo app yakaratidza vanhu ma profiles zvinoenderana padhuze pamwe ne Facebook shamwari dzavakagovana zvakafanana. Iye zvino, zvinongobatanidza vashandisi nevanhu vepedyo nenharaunda yavakasarudza.
Vashandisi vanogona kusarudza kubatana nemumwe munhu nekukanda bhatani rekutaurirana uye kuenzanisa kana kusiya chirevo pane peji. Maprofiles anopa kukurudzira kuti hurukuro itange sekuti "Kana kuda izvi zvisina kunaka, ini handidi kuva akarurama…" uye "Chinhu chimwe chete chandingade kuziva nezvako ..."
Hinge inokuratidza rumwe ruzivo nezve vanhu, saka kana usiri kugadzikana kusangana nevasingazive kubva paInternet, izvi zvinoita kuti zvive nyore. Inokupa mazita ekupedzisira evanhu uye kazhinji nharaunda yavo, zera, kukwirira, basa, guta rekumusha, uye koreji.
Iyo app ndeyemahara asi inoda kuti vanhu vabhadhare, vachivakumbira kuti vabhadharire "roses" chaiyo inoreva kuti standout inowirirana neshumiro yaunosarudzira iwe zvichibva pane zvauri kutsvaga. Izvo zvese zvinonzwa zvakanyanya senge episode yeiyo The Bachelor . Iwo maalgorithms anotora zuva nezuva kune ako akanakisa mutambo anozivikanwawo kuti haabatsire. Nguva zhinji ivo vanosarudza mumwe munhu ari kure zvakanyanya kana aine hukama hwakasiyana hwezvematongerwo enyika. Mune zvimwe zviitiko, ivo vangakuratidze mumwe munhu waunotoziva uyo anogona kunge asinganetsi.
Kusiyana nemamwe maapplication kwaunofanirwa kuti vaviri vabvumirane kufananidza meseji isati yatumirwa, vanhu vari paHinge vanogona kukutumira meseji kuvhura kuti hurukuro iende. Kunyange iri yemahara, pane yakabhadharwa vhezheni futi. Nhengo Yakasarudzika inenge madhora makumi matatu kwemwedzi, $ 60 kwemwedzi mitatu, kana $ 90 kwemwedzi mitanhatu uye inokutendera kuti utumire zvisungo zvisina muganho uye kumisikidza mafirita akasimba.
Nei Takasarudza Icho: Isu takasarudza Mechi nekuti ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune akakomba madhara ane pfungwa dzewanano.
Nhengo dziri kutsvaga zvakanyanya hukama kana roorano
Inopa vashandisi ruzivo rwakadzama nezve zvingangodaro machisi
Sarudzo yemahara inopa vashandisi kungotarisa, vasina nzira yekuwana machisi kana mameseji
Nekuti iapp yaunobhadhara, vashandisi vanoitora zvakanyanya
Unogona chete kutanga hurukuro nesarudzo Mechi zvipo kwauri
Match ndeye yekare yakamirira chikonzero. Nekuti vashandisi vanofanirwa kubhadhara kuve nhengo, zvinoreva kuti vanhu vanobatana vanoisa pfungwa pakuzvipira. Match.com yakavambwa naGary Kremen naPeng T. Ong muSan Francisco muna 1993. Kubva ipapo, yakaramba ichizivikanwa, kunyanya nevanhu vari kutsvaga hukama hwakakomba.
Paunosaina, unopinda zita rako, zera, kureba, kuti unoda vana kana kwete, kuti hauna kuroora sei, uye kana uchisvuta. Iwe unobva wapindura mubvunzo "Chii chinoita kuti ufare kwazvo?" kusarudza kubva pane zviitiko zvinosanganisira konzati, kubika, kubloga, kuratidzira-kutarisa, mitambo, nezvimwe. Tevere, iwe sarudza izvo zvauri kutsvaga kune mumwe wako, kusanganisira zera renji, kureba nhanho, chinamato, uye kana kana kwete izvo misoro iri "inofanirwa-kuva".
Nesarudzo yemahara, nhengo dzinowana mameseji akaganhurirwa kubva kune avo "epamusoro mapiki" ayo Matiki akavasarudzira zvichienderana nekuenderana. Iyo yekutanga sarudzo inobvumira mitezo mitezo isina muganho, kuda, kugona kuona wese munhu anokufarira uye akatarisa chimiro chako, hurukuro dzega neumwe nehunyanzvi hwekufambidzana, uye nezvimwe.
Nehurombo, kana iwe uchifarira kushandisa Match, uchafanira kubhadhara; kana zvisina kudaro, haugone kuona kuti ndiani ari kukutumira mameseji kana zvavari kutaura. Nhengo dzinodhura madhora gumi nemana pamwedzi pagore regore, ingangoita $ 22 pamwedzi kwemwedzi mitanhatu, uye kutenderera madhora makumi matatu kwemwedzi mitatu.
Chikonzero Nei Tichiisarudza: Raya inozivikanwa nekuve yega yekufambidzana app inowanzoitwa nevanhu vane mukurumbira uye vanokurudzira.
Nhengo dzinoremekedza uye dzinonakidza
Kusarudzika kweapp kunoita kuti zvinyanye kunakidza uye kunakidze
Zvinofadza kuona mukurumbira maficha maficha
Nhengo dzinofanirwa kubhadhara zvimwe zvekuda zvezuva nezuva kana zvasvika pamuganhu wezuva nezuva
Inoshanda chete paPhones
Raya inozivikanwa nekuve imwe yeakanyanya kufambidzana mapurogiramu, kudana A-zvinyorwa uye vanokurudzira senhengo. Nekuti ndeyekukoka-chete, kune maitiro ekunyorera, uye vanhu vanofanirwa kubhadhara kuti vave nhengo, kune chepamusoro-mhando kukwidza kwachiri kupfuura chaicho app.
Raya ingangoita $ 7 pamwedzi uye iwe unogona kusvetuka kuburikidza nevanhu pasirese. Kana iwe ukasvika pane zvaunofarira zvezuva nezuva, unogona kubhadhara zvinosvika madhora manomwe pamakumi matatu ezvinodiwa zvezuva nezuva, kana iwe unogona kungotaurirana nehukama hwako hwazvino, uhwo chirongwa chinokukurudzira kuti uite. Paunenge iwe uri nhengo, unogona kupa shamwari shamwari kupfuura iyo inogona kubatsira kukurumidza kubvuma kwavo, kunyange hazvo chirongwa ichi chiine kodzero yekuramba kunyorera.
Nhengo dzinowanikwa pasi rese uye dzinowanzo shanda munzvimbo dzekugadzira Zviri chaizvo Soho Imba yekufambidzana. Unogona kubatanidza yako Instagram account, sarudza rwiyo, gadzira slideshow yemifananidzo, uye unogona kutsvaga kudanana kubatana kana shamwari. Iwe unogona zvakare kutsvaga nenzvimbo kuti uone kuti ndiani ari padhuze neapp. Raya anokuratidzawo shamwari dzaunowirirana nadzo kana imi mose muine nhamba yefoni yeshamwari, saka munogona kugara muchibvunza pal kana vachitsvaga zuva renyu. Iwe unogona zvakare kutsvaga nhengo mune rimwe guta kana mune yakatarwa indasitiri, zvichiita kuti zvive nyore kunyatso kusangana kana kusangana nevanhu.
Nei Tichiisarudza: Bumble ine pfungwa yakasarudzika: Vakadzi vanotumira mameseji varume vozopihwa maawa makumi maviri nemana kuti vapindure, vachiita iro rinotungamirwa nevakadzi.
Zviri nyore kubatana nevanhu vakawanda panguva imwe chete
Vakadzi meseji kutanga kuitira kuti vagone kusarudza musoro wenyaya
Nzvimbo-yakavakirwa kuti iwe ugone kuona kuti ndiani ari padyo newe kana iwe uri pazororo kana mutaundi nyowani
Varume vanogona kupindura zviri nyore nenzira dzisinganzwisisike uyezve kune kunetswa kwakawanda
Varume vazhinji havanyorwe ruzivo rwakawanda pamusoro pavo
Iwe une yakatemwa nguva yekushandisa opener, saka iwe unofanirwa kutarisa iyo app kazhinji
Pakatanga Bumble nemukadzi muvambi Whitney Wolfe muna 2014, yaive yakavakirwa papfungwa yekuti vakadzi vachatumira meseji kutanga, zvichireva kuti vanogona kusarudza kutanga hurukuro nekudzora rondedzero. Wolfe akaenderera mberi nekugadzira iyo Forbes 30 Under 30 runyorwa pamwe neiyo Nguva 100 Runyorwa uye akazove mukadzi mudiki kutora kambani yeruzhinji pa31 chete.
Kushandisa Bumble kuri nyore. Gadzira chimiro nemapikicha ako uye neruzivo nezvako, uye ipapo unogona kuve nehurongwa hwepachena kana kubhadhara zvimwe sarudzo. Iyo "Spotlight" chirongwa chinovimbisa kusvika kagumi kakapindana machisi uye inokuisa iwe kumberi kwetambo kwemaminitsi makumi matatu kuti ako anokwanisa machisi akuone iwe kutanga. Iwe unogona kubhadhara ingangoita $ 1 pamakumi matatu emwenje, kana angangoita madhora matanhatu pane imwe chete yekutarisa. Kana iwe unogona kuwana makumi matatu emwenje kune angangoita makumi mashanu emadhora.
Imwe sarudzo ndeye SuperSwipe, iyo inoti uchawana "kusvika pamakumi gumi ehurukuro zvakare." SuperSwipes inobvumidza iwe kuti uve wakanaka semumwe munhu, saka pavanotanga kutsvaira, unove mumwe wevanhu vekutanga vavanoona. Iyo inenge $ 1 ye30 SuperSwipes uye $ 3 imwe neimwe maSuperSwipes maviri. Kana iwe usinga shungu sekubhadharira idzi mbiri sarudzo, iwe unogona zvakare kukwidziridza account yako kune premium kuvhura ese maficha panguva imwe chete. Vashandisi vePrimiyamu vanosimudzira vangangoita madhora gumi nemasere uyezve vagamuchire risingagumi mafirita, mafirita epamberi, mafambiro ekufamba kuti uone kuti ndiani ari kutsvaira mune dzimwe nzvimbo, uye backtracks asingagumi kuitira kana ukatsvaira nzira isiriyo pane mumwe munhu, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
Bumble isarudzo huru kune mumwe munhu anotanga kubuda anoda kuona vese vanhu vanokodzera kutenderedza. Iwe unofanirwa kutsvaira kurudyi kuti uenzane nevanhu, uyezve une maawa makumi maviri nemana ekuti utange kufamba uye kutanga chat, saka iwe unofanirwa kutarisa iyo app kazhinji, kana zvisina kudaro machisi achapera. Varume vanobva vaine maawa makumi maviri nemana ekupindura. Unogona kutsvaga Anwendung nemafuta, kusarudza waunofarira (varume, vakadzi, kana munhu wese), zera renji, uye chinhambwe. Iwe unogona zvakare kumisikidza epamberi mafirita, uchitsvaga yakatarwa kureba, chiratidzo chekuongorora nyeredzi, redzidzo kumashure, uye nezvimwe.
Zvakanakisa kune LGBTQ Kufambidzana: HER
Nei Takasarudza Icho: Isu takasarudza HER nekuti ndiyo yepasirose yemahara yemahara kufambidzana app yevakadzi veGBBTQ.
HER ndiyo yemahara yemahara kufambidzana app yevakadzi vevabonde uye vevamwe vakadzi
Iyo app inogovera LGBTQ + nhau uye zviitiko zvemuno zvichiitika, zvichipa nzvimbo dzakachengeteka
Vanhu vanogunun'una kuti vamwe vakaroora vari kutsvaga matatu matatu paapp
Kana iwe ukasabhadhara, iwe unofanirwa kumirira maawa kuti uwane mamwe swipes
HER ndiyo yepasirose yemahara yemahara kufambidzana yevakadzi vechikadzi, ichipa kugona kuenzanisa, pamwe nekupa nhau pamusangano wekusangana munzvimbo dzakachengeteka. Iyo app inoshanda senzvimbo uye inoedza kuve inogamuchira uye inotsigira.
Zvakawanda saTinder, HER ndeye zvese nezve kutsvaira. Swipe kuruboshwe zvinoreva kuti haufarire munhu wacho, nepo swipe kurudyi (kana emoji moyo) zvichireva kuti iwe unoda kuziva iye munhu wacho. Ipapo, munhu iyeye anogona kusarudza kana iko kunzwanana uye kukutumira iwe meseji.
Kunyangwe iri yemahara, kune zvakare matatu marudzi eeprimiyamu kunyoresa nhengo. Chekutanga, nhengo yemwedzi mumwe inotanga pamadhora gumi nemashanu, kwemwedzi mitanhatu ingangoita madhora makumi matanhatu uye kwegore rimwe iri madhora makumi mapfumbamwe.
Nei Tichiisarudza : JSwipe inzira huru yekuti vanhu vechiJuda vatsvage uye vasangane, zvisinei nekwavanobva.
Kugona kusangana nema singles echiJuda zviri nyore
Marongerwo eApp anoita kuti zviome kuona kuti vanhu vanovakirwa kupi kana kutsvaira kubva
JSwipe isarudzo huru kana iwe uri muJuda kana uchida kufambidzana nevarume kana vakadzi vechiJuda. Yakatangwa muna2014 pamusoro pePaseka nemuvambi David Yarus, uyo aishandirawo Birthright Israel naHillel panguva iyoyo, iyo Brooklyn-based app yakazowanikwa nemukwikwidzi wayo, JDate.
PaJSwipe, iwe unopinda pfupi bio, yako dzidzo, uye zera rako. Iwe unobvunzwawo kuzadza kuti kana iwe uchichengeta kosher nesangano rako. Ipapo, iwe unogona kutanga kutsvaira. Peji rako reprofile rinobatana neako Facebook peji, saka rinokuratidza izvo zvaunofarira zvaunogovana nemitambo zvichibva pane zvawaimbofarira paFacebook.
JSwipe inopa yemahara vhezheni, pamwe neyekutanga-kirasi nhengo, kwaunogona kuenda kune zvega zviitiko uye uwane zvinonwiwa semahara zvinwiwa uye mutengesi. Iyo yakasarudzika vhezheni zvakare inobvumidza iwe kuti uone kuti ndiani akafarira yako mbiri, kusimudzira yako mbiri kune mamwe machisa, swipe
Nhengo yemwedzi mumwechete inenge madhora makumi maviri nemashanu, mwedzi mitatu inodhura madhora makumi mana nemashanu, uye nhengo yemwedzi mitanhatu ingangoita madhora makumi matanhatu. Zvakawanda saTinder, zvinokuratidza kuti ndiani arikusvetuka akakukomberedza zvichienderana nenzvimbo, asi iwe unogona zvakare kumisikidza iyo mamaira radius yakakura kwazvo uye uone ma singles pasi rese.
Nei Tichiisarudza: Iwe haugone kufuratira iyo yekutanga kufambidzana app, Tinder, iyo yakaita kuti swipe. Izvo zvakanaka kune zvekukochekera-kumusoro kana kwenguva refu kufambidzana.
Yakakwana yekunyudza chigunwe chako munyika ye online kufambidzana
Nyore kufamba, kunyanya kune vekufambidzana app vanotanga
Imwe yesarudzo dzakasarudzika dzakanangana nezvakawanda kuma hook-ups
Inosimbisa sarudzo dzisingaperi dzaunosangana nadzo uchisvetuka
Tinder ndeyechokwadi iyo app iyo yakatanga zvese. Yakatangwa muna2012 uye ichinyatso chinja nzvimbo yekufambidzana nekusingaperi, kuunza singles kune nyika yekutsvaira kuruboshwe kana kurudyi kuenderana nevanogona kuve varara kana vamwe vakakomba vamwe.
Uye apo paimbove nevanhu vazhinji vaitsvaga zvese zvakasiyana zvinhu, izvozvi zvakagadzirirwa zvakanyanya kune zvekupfimbana. Tinder ingangodaro iri nani mutaundi diki uko musina vanhu vazhinji pane mamwe ma niche maapuro asi uchinyatso ziva kuti vanhu vari kutsvaga mamwe marongero asina kurongwa.
Ipo payakatanga seapp yemahara zvachose, pari zvino pane yemahara uye yakabhadharwa premium sarudzo inobvumidza vashandisi ku "super se" vanhu (imwe fomu yekubata kumeso iyo inonzi inokanganisa mikana yako yemutambo), shandisa iyo pasipoti ficha kuti uone kuti ndiani abuda imomo mune dzimwe nzvimbo, uye ona kuti ndiani akakuda usati wasvetukira pavari. Tinder Goridhe inopa vashandisi zvese izvo uye zvimwe zveinosvika madhora gumi nemashanu pamwedzi, nepo Tinder Platinum ichipa vashandisi izvo zvingasarudzwa pamwe nekwaniso yekutumira meseji kune mumwe munhu usati waenzana neinenge $ 10 pamwedzi kwemwedzi mitanhatu.
Kudhaunirodha chirongwa chekufambidzana kunogona kuita sekuzvipira kukuru uye unzwe kuremerwa kana iwe usina chokwadi chekutanga kutanga, nekuti vese vane akasiyana vibes. Hinge ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kana iwe uchitsvaga kuti uwane zvakanyanyisa kukomba nezve app kufambidzana. Iyo inokupa iwe rumwe ruzivo nezve zvingangoitika misi uye inokurudzira zvine chinangwa kutaurirana. Raya yakanaka kana iwe uri kutarisira kuona munhu ane mukurumbira kana kuda kusangana nevamwe vakaita-senge zvisikwa, asi zvinogona kunetsa kuwana kukokwa kwazviri.
Bumble yakanaka kana iwe uri kutarisira kuenda pane yakawanda yekutanga misi. Iyo app haina kukuudza zvakawanda nezve vanhu, asi zvinoita kuti zvive nyore kutsvaira zvisingagumi uye kutanga kutaura. Funga nezvazvo zvakanyanya sekusangana nemumwe munhu kubhawa zvisina kujairika. Kana iwe uri kutsvaga kufambidzana nevakadzi uye uchida app chete izvo, HER ndiko kwako kwakanyanya kubheja. Uye kana iwe uchida kuzvichengeta zvisina kujairika, Tinder ndiye wekare akatendeka nechikonzero.
Kufambidzana Mapurogiramu Anoshanda Sei?
Mamwe maapplication anoda mapato ese ari maviri kuti atsvaire kurudyi kana achifarira obva akubvumira kuti ubatanidze. Vamwe vanotendera munhu mumwe chete kutumira meseji, uyezve iye anogamuchira anogona kusarudza kuti vade kupindura kana kwete. Mamwe mashoma emaapps anopa ruzivo rwakadzama, kusanganisira koreji, kukwirira, uye kunyangwe vanhu vachida vana kana kwete, asi vamwe vachizokuratidza vepedyo vangangoita navo vasina ruzivo rwakawanda.
Iko Kune Mahara uye Anobhadharwa Sarudzo dzeKufambidzana Mapurogiramu?
Mazhinji kufambidzana maapplication mahara, kana zvirinani vane yemahara sarudzo pamwe neyemubhadharo, yakabhadharwa sarudzo. Sarudzo yemahara inowanzo kupa vanhu mukana wekutsvaira, nepo kubhadhara kuchibvumira vanhu kuti vanyanye, kumisikidza mafirita anoratidza chete kumwe kusimudzira, chitendero, kana kubatana kwezvematongerwo enyika, semuenzaniso. Kune akawanda maapplication, zviri nyore kwazvo kurodha pasi uye wozoshandisa iyo yemahara vhezheni kunze kwekunge iwe uchitsvaga chimwe chakanyanya kusarudzika. Mamwe maapplication, saRaya, anoda kuti vese vashandisi vabhadhare mari diki yemwedzi. Kazhinji, muripo wacho unenge uri mushoma kana iwe uchibhadhara kwemwedzi mishoma kana kupfuura.
Zvakawanda Sei Zvekufambidzana Mapurogiramu?
Kufambidzana maapplication anotangira pane emahara kusvika pamadhora zana kana iwe ukawana iyo premium vhezheni uye woisa mari mumwedzi mishoma yacho. Idzo sarudzo dzinodhura dzinokupa huwandu hwezvipo zveprimiyamu zvinokwidziridza chimiro chako, kungave kukuisa munzvimbo yekutarisisa yemitambo ingangoitika kana kukupa iwe sarudzo yekutumira mumwe munhu usina kutanga watanga.
Takabvunza nyanzvi nezve maapplication, takaverenga wongororo, uye takaongorora edu edu emakore eruzivo tichivashandisa. Isu takatsvaga zvakare maapplication ayo anopa huwandu hwakawanda hweruzivo nezve vamwe, pamwe nekuchinjika kana zvasvika pakuronga zvirongwa. Izvo zvaive zvakakosha kuti isu tipe dzakasiyana siyana sarudzo dzekufambidzana zvaunofarira, kunyangwe zviri zvenguva hookups, ekutanga misi, kana kunyange kuroora. Kubatanidzwa kwaivewo chinhu chakakosha mukusarudza kwedu sarudzo, saka maapplication anodyidzana nenzira dzakasiyana dzepabonde uye zvitendero zvakaita runyorwa.